Weerar Khasaara Dhaliyay Oo Ka Dhacay Gudaha Kenya. – Calamada.com
Weerar Khasaara Dhaliyay Oo Ka Dhacay Gudaha Kenya.
calamada August 20, 2018 1 min read
Wararka ka imaanaya gudaha dalka Kenya gaar ahaan dhulka ay xooga ku haysato Dowladda Saliibiyadda Kenya ayaa sheegaya in saacadihii la soo dhaafay ay halkaasi ka dhaceen weeraro ay fuliyeen Ciidamada Mujaahidiinta .
Ciidamada Mujaahidiinta ayaa weerarka ku qaaday deegaanka loo yaqaanno Ijaara oo ku yaalla xadbeenaadka kala qeybiya Kenya iyo Somaliya, islamarkaana u dhow Gaarisa iyo Laamuu .
Weerarka ayaa Ciidamada Mujaahidiinta waxay ku qaadeen xarunta Shirkada Isgaarsiinta ay leedahay Dowladda Kenya ee loo yaqaanno Safaricom Iyo goob fariisin u aheed ciidamo Boolis ah oo ilaalo ka hayay Shirkadaasi.
Ciidamada Mujaahidiinta waxaa u suura gashay in ay burburiyaan dhammaanba xarumihii ay weerareen, iyagoona halkaasi ka soo qaniimaystay dhammaanba wixii yiilay goobaha la weeraray.
Weerarkani ayaa ku biiraya howlgalla joogta ah oo Ciidamada Mujaahidiinta ay ka fuliyaan dhulka ay Kenya gumeysato oo ay ku dhaqan yihiin Muslimiinta, weeraradasi ayaa khsaaro xoogan oo Naf iyo Maal ah lagu gaar siiyay Dowladda Saliibiyiinta Kenya.
Previous: Dhamaan Dadka Muslimiinta Waxaan Leenahay Ciid Mubaarak.
Next: Halkan Ka Dhageyso Barnaamijka Faafreebka Wararka 10-12-1439 Hijri.
1 thought on “Weerar Khasaara Dhaliyay Oo Ka Dhacay Gudaha Kenya.”
Maxamed Manye cumar says:
Masha allah allahu akbar